Darodar And Buttons Ho an'ny tranonkala Spam - Miaro ny asanao amin'ny seminera
Ny antonta madio sy marina dia manan-danja indrindra amin'ny orinasan-tserasera. Ny fikarakarana ny mason'ny mpikaroka web dia mety hitondra vola be ho anao rehefa tonga amin'ny ambaran'ny votoatiny . Indraindray, mampalahelo ny miaiky fa maherin'ny 78% amin'ny data Google Analytics misy ny varotra varotra sy ny bokotra ho an'ny tranonkala spam - pale blue lace dress.
Alexander Peresunko, mpitarika ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , dia manasongadina fa ny Darodar sy ny bokotra ho an'ny tranonkala amin'ny tranonkala dia iray amin'ireo sariitatra tsy manam-pahaizana karazana fikarohana fikarohana nataon'ireo tranonkala sy mpanelanelana consultants GA data. Izany no mahatonga ny Google Analytics ho manan-danja indrindra amin'ny tompona tranonkala, satria manampy ny mpizarazara votoaty handinihana ny angon-drakitra, ary hisoroka ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy ara-barotra.
Ny zavatra tokony ho fantatra momba ny tranonkala spam
Darodar dia iray amin'ny tetik'asa fanadiovana fikarohana izay manintona ny fifamoivoizana marina sy mpanjifa mba handinihana ny angon-drakitra. Amin'ny fiezahana hanaraka ny toerana misy ny fifamoivoizana, ny tompon'ny tranonkala dia miafara amin'ny fanaovana vola be ho an'ny spammers, izay toerana itodihana azy ireo mankany amin'ny toerana maloto..Araka ny filazan'ny SEO, Darodar sy ny tsindry ho an'ny tranonkalan'ny tranonkala dia adihevitra feno fientanentanana amin'izao fotoana izao any amin'ny sehatry ny orinasa an-tserasera sy aterineto.
Mety hanelingelina ny hihaza ny rohy mifandray aminao ianao ary hahita fa ny fifamoivoizanao dia avy amin'ny spammers. Raha tsy misy ny fifamoivoizana sy ny bokotra ho an'ny tranonkala Spam dia ny dingana voalohany amin'ny fahamalinana.
Ny fiantraikan'ny bokotra amin'ny fitsidihana spam momba ny tranonkala ao amin'ny tatitra GA
Ny angona Google Analytics izay voakasiky ny bot sy ny fifamoivoizana tsy ilaina dia mety hikorontana amin'ny fahatakarana sy ny fanadihadiana. Ny spammer dia afaka mampiasa ny loharanom-pifaneraseran'ny tranonkalanao ary manindry ny fahombiazan'ny tranonkalanao. Nanararaotra an'io teknolojia io ny mpisoloky amin'ny aterineto mba hijery ireo vulnerability amin'ny tranonkala mba hakana azy ireo.
Ahoana no hanakanana ireo bokotra ho an'ny tranonkala spam amin'ny fanalàna ny data GA
Misy fanontaniana sasantsasany momba ny fifamoivoizana momba ny bot, ny fifamoivoizana anatiny, ary ny bokotra ho an'ny tranonkalan'ny tranonkala amin'ny tranonkala. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana momba ny raharaham-barotra, ny hackers dia mety hitarika mankany amin'ny tsy fahampian'ny orinasan-tserasera. Ity misy toro-lalana izay hanampy anao hisintona ireo bokotra ho an'ny tranonkala iray avy amin'ny tranokalanao:
Sokafy ary fidio ny 'Admin Tab' ny GA
Tsindrio ny 'Filaharana rehetra' ary tsindrio ny bokotra 'Create New Filter'
Mamorona anarana vaovao amin'ny sivana vaovao
Fidio ny 'Fitaovana fisakanana' ary mametra ny karazan-tsivana efa voafaritra araka ny safidy
Tsindrio ny 'Ikonitra ny fonosana' ary fenoy ny faritra misy spammer mba hosoloina
Vonjeo ny karazana sivana ary ampiharo izany amin'ny tranokalanao. Tadidio fa hamonjy ny mombamomba anao manokana amin'ny fomba fijerinao ny sivana ianao mba hisorohana ny fahaverezan'ny fampahalalam-baovao sarobidy rehefa tsy misy spam.
Darodar, ny fifamoivoizana varotra, ny bokotra ho an'ny tranonkala Spam dia anisan'ireo fitaovam-pikarohana fikarohana tsara indrindra izay nametaka ny angon-drakitrao. Ny fampahalalam-baovao sy ny fandikana diso dia mety hitarika anao hanao fanapahan-kevitra tsy mety amin'ny raharaham-barotra an-tserasera. Ny fahatakarana sy fanadihadiana ny angon-drakitra dia zavatra tena ilaina tsy azo tsinontsinoavina. Alefaso ireo bokotra ho an'ny tranonkala tranonkala sy ny fifamoivoizana tsy miangatra mba hahazoana fampielezan-kevitra amin'ny famokarana tokana.